Kuyini Ukuvezwa Okuqhathaniswa Nemvume Eshiwo? | Martech Zone
Kuyini Ukuvezwa Okuqhathaniswa Nemvume Eshiwo
NgeSonto, ngoJuni 8, i-2014 ULwesihlanu, February 12, 2016 Douglas Karr
ICanada iyazibophezela ekwenzeni ngcono imithethonqubo yayo ku-SPAM kanye nemihlahlandlela okumele amabhizinisi ayilandele lapho ethumela ukuxhumana nge-imeyili okusha ICanada Anti-SPAM Law (CASL). Kusuka kochwepheshe bokuhlinzekwa engikhulume nabo, umthetho awukona konke lokho - futhi mathupha ngicabanga ukuthi kuyamangaza ukuthi sinabohulumeni bezwe abaphazamisa izingqinamba zomhlaba. Cabanga lapho sithola ohulumeni abangamakhulu ambalwa abahlukene bebhala owabo umthetho… kungenzeki nhlobo.
Esinye sezici ze-CASL umehluko phakathi kwe- evezwe futhi kusikiselwe imvume. Imvume eveziwe iyindlela yokungena lapho umamukeli we-imeyili azichofoze khona noma azibhalisile. Imvume eshiwo ihluke kancane. Ngake ngaba nokuphikisana nommeleli wokulethwa kokulethwa kwabahlinzeki be-imeyili kulokhu. Wayenginikeze ikhadi lakhe lebhizinisi elinekheli lakhe le-imeyili - futhi ngalisebenzisa njengo kusikiselwe imvume yokumthumela nge-imeyili incwadi yami yezindaba. Ukhale ngqo kumhlinzeki wami wesevisi we-imeyili okwenza kube nzima kakhulu. Wazizwa enganikanga mvume. Ngizwe sengathi kwenzekile.
Wayenephutha, kunjalo. Ngenkathi umbono wakhe uqobo wawuyimfuneko yemvume ezwakalisiwe, awukho umthethonqubo onjalo (okwamanje). Kumthetho wase-United States 'we-CAN-SPAM, awudingi imvume ekhonjisiwe noma ezwakalayo yokuthumela i-imeyili kunoma ubani… Ucelwa ukuthi unikeze indlela yokuphuma uma ungenabo ubudlelwano bebhizinisi nalowo obhalisile. Kunjalo… uma unobudlelwano bebhizinisi, awudingi ngisho nokuphuma! Ngenkathi lowo kungumthethonqubo, abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili bakuthatha baqhubeke kakhulu namapulatifomu abo.
Kuvezwe Izibonelo Zemvume Esetshenzisiwe
Nge-CASL, nazi izibonelo zomehluko phakathi kwezimvume eziveziwe neziphakanyisiwe:
Imvume Eveziwe - Isivakashi sesiza sakho sigcwalisa ifomu lokubhalisa ngenhloso yokufakwa ohlwini lwakho. Kuthunyelwa i-imeyili yokuqinisekisa ukungena efuna ukuthi umamukeli achofoze isixhumanisi ukuqinisekisa ukuthi ufisa ukufakwa ohlwini. Lokhu kwaziwa ngokuthi indlela yokungena kabili. Lapho bechofoza isixhumanisi, usuku / isikhathi kanye nesitembu se-IP kufanele kuqoshwe ngerekhodi labo lokubhalisa.
Imvume Eshiwo - Isivakashi sesiza sakho sigcwalisa ifomu lokubhalisa ukulanda iphepha elimhlophe noma ukubhalisela umcimbi. Noma umthengi ukukunikeza ikheli le-imeyili ngekhadi lebhizinisi noma ekuphumeni. Abazange banikeze ngokucacile imvume yokuthi babefisa ukuthola ukuxhumana nge-imeyili okuvela kuwe; ngakho-ke, imvume yashiwo - ayivezwanga. Usengakwazi ukuthumela ukuxhumana nge-imeyili kulowo muntu, kodwa isikhathi esilinganiselwe kuphela.
Ngenkathi cishe yonke imigomo yabahlinzeki be-imeyili isho ukuthi kufanele ube nayo imvume, bakunikeza zonke izindlela zokungenisa noma yiluphi uhlu ongaluthola noma uluthenge. Ngakho-ke, imfihlo engcolile yale mboni ukuthi benza ithani lemali kumakhasimende abo athumela i-SPAM ngenkathi bemasha bezungeza imboni bememeza ukuthi baphikisana nayo ngokuphelele. Futhi bonke ubuchwepheshe be-ESP's super-duper Delivery, ama-algorithms, nobudlelwano abunandaba ne-squat… ngoba abalawuli okwenza kube kubhokisi lokungenayo. Umhlinzeki Wensizakalo Ye-inthanethi uyakwenza. Leyo yimfihlo enkulu engcolile yomkhakha.
Imvume Iwuthinta Kanjani Ibhokisi Lemilayezo Engenayo?
Ivezwe ngokuqhathaniswa nemvume eshiwo ayinamthelela ngqo ngqo emandleni akho okufinyelela ebhokisini lokungenayo! Umhlinzeki wesevisi ye-intanethi onjenge-Gmail akanalo nhlobo ulwazi lapho bethola i-imeyili noma ngabe ubunayo noma cha imvume yokuyithumela… ungalokothi ukhumbule iqiniso lokuthi ngabe livezwe noma cha. Bazovimba i-imeyili ngokuya nge-verbiage, ikheli le-IP elithunyelwe kusuka kulo, noma amanye ama-algorithm abawasebenzisayo. Ngingeza ukuthi uma ulahlekelwa kancane ngencazelo yakho yomuntu siqu ye- kusikiselwe, ungashayela imibiko yakho yogaxekile futhi ekugcineni uqale ukuba nobunzima ekufinyeleleni kubhokisi lokungenayo.
Bengihlala ngithi uma imboni ifuna ngempela ukulungisa inkinga nge-SPAM, bese wenza ama-ISP aphathe imvume. I-Gmail, ngokwesibonelo, ingahle iqalise i- API ukungena lapho bazi khona ukuthi umsebenzisi wabo unikeze imvume ezwakalayo yokuthola i-imeyili evela kumthengisi. Angiqiniseki ukuthi kungani bengenzi lokhu. Ngingazimisela ukubheja okuthiwa imvume-based abahlinzeki benkonzo ye-imeyili babekhala uma kwenzeka konke… bazolahlekelwa yimali eningi bethumela ugaxekile ongaka.
Uma uthumela i-imeyili yezentengiso futhi ufisa ukukala amandla akho okufinyelela ebhokisini lokungenayo, uzodinga ukusebenzisa insiza efana nabaxhasi bethu ku 250ok. Zabo inbox onolwazi ikunikeza ngohlu lwembewu lwamakheli e-imeyili ongawangeza kuhlu lwakho lwe-imeyili bese bazokubika ukuthi ngabe ama-imeyili akho aya ngqo kufolda engenamsoco noma enza ebhokisini lokungenayo. Kuthatha cishe imizuzu emihlanu ukusetha. Siyisebenzisa ku- CircuPress lapho sibona ukubekwa kwebhokisi lokungenayo okumnandi. Isevisi yabo izokwazisa futhi noma ngabe insizakalo yakho ivaliwe noma cha.
Imithetho yaseCanada ithatha esinye isinyathelo futhi lokho kufaka umkhawulo weminyaka emi-2 ekuthumeleni i-imeyili kunoma ngubani onaye Kusho imvume. Ngakho-ke, uma umuntu onobudlelwano bebhizinisi naye ekunika ikheli lakhe le-imeyili, ungabathumela i-imeyili… kepha isikhathi esithile kuphela. Anginasiqiniseko sokuthi bazoyisebenzisa kanjani imithetho enjalo. Ngicabanga ukuthi abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili bazodinga ukuvuselela amasistimu abo ukuze bafake ukungeniswa kohlu kwezimvume ezifakiwe ezikuvumela ukuthi ungeze umzila wokucwaningwa kwamabhuku lapho kwenzeka isikhalazo. O, futhi i-CASL idinga ukuthi uthole imvume ebonakalayo koxhumana nabo abakhona ohlwini lwakho ngoJulayi 1, 2017 usebenzisa i- umkhankaso wokuqinisekisa kabusha. Abathengisi be-imeyili bazothatha kakhulu ngalowo!
Imininingwane engaphezulu ku-CASL
ICakemail yenze umsebenzi omuhle wokuhlanganisa umhlahlandlela we-CASL - unga landa lapha. Oh - futhi uma ufisa ukuphatha okungcono okubhaliselwe kwakho, nika Ungafaki ngizame! Balandelela yonke i-imeyili eshaya ibhokisi lakho lokungenayo le-gmail futhi bayakuvumela ukuthi uqoqe okuqukethwe okufunayo, noma uzikhiphe ohlwini lokuqukethwe ongakufuni. I-Gmail kufanele ibathenge!
Inothi lokugcina kulokhu. Angifuni abantu bacabange ukuthi ngingummeli we-SPAM. Angi… ngicabanga iveze imvumeAmasu we-imeyili asekelwe ahlinzeka ngemiphumela yebhizinisi ehlukile. Kodwa-ke, ngingeze futhi ukuthi ngiyiqiniso ngalokhu futhi ngibonile izinkampani khulisa uhlu lwabo lwe-imeyili bese bakhulisa ibhizinisi labo ngonya Kusho imvume izinhlelo.
Tags: cakemaili-can-spamCanadaICanada Anti-SPAM Lawi-caslukuhanjiswaukuvezaiveze imvumekusikiselweKusho imvumeukungena ngemvumeukuphumaumthetho wogaxekile
I-LinkedIn Iba Yomuntu Ngokuxoxa Kwayo Indaba